June 19, 2021 - Cele Fans
ရေကိုသာသောက်ဖို့ ပြောခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုကြောင့် ကိုလာကုမ္ပဏီ ဒေါ်လာ(၄)ဘီလီယံအရှုံးပေါ်
June 19, 2021 Cele Fans Comments Off on ရေကိုသာသောက်ဖို့ ပြောခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုကြောင့် ကိုလာကုမ္ပဏီ ဒေါ်လာ(၄)ဘီလီယံအရှုံးပေါ်
နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ေစ်းကြက္တစ္ခုရဲ႕ ေရာင္းအားကို ျမႇင့္တင္ရာမွာ အေကာင္းဆုံး ေၾကာ္ျငာကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း နာမည္ႀကီးတဲ့ အတုိင္းအတာေပၚမူတည္ၿပီး အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္မွာ စပြန္ဆာေတြ ဝုိင္းေနတတ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က နာမည္ေက်ာ္ ေပၚတူဂီတုိက္စစ္မွဴး စီေရာ္နယ္ဒုိရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို အားလုံး သိလုိက္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အသင္းေခါင္းေဆာင္ စီေရာ္နယ္ဒုိဟာ ဟန္ေဂရီအသင္းနဲ႔မကန္ခင္ အႀကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သူ႕ေရွ႕မွာရွိတဲ့ ကိုကာကုိလာပုလင္းႏွစ္လုံးကို ျမင္ကြင္းကေန ဖယ္ရွားၿပီး၊ ေရကုိသာ ေသာက္ၾကဖုိ႔ ေျပာခဲ့တာပါ။ သူ႕သေဘာက ကုိလာကုမၸဏီကုိ နစ္နာေစလုိတာထက္၊ […]
June 19, 2021 Cele Fans Comments Off on လေယာဉ်ပစ်လောင်ချာဝယ်လှူချင်လို့ ရည်စူးပြီးထိုင်းထီမှ ဘတ်သိန်း ၁၂၀ ပေါက်တဲ့ မြန်မာလုပ်သား
မြန်မာလုပ်သားတစ်ဦးထိုင်းထီပထမဆု နှစ်ဆောင်တွဲကံထူးနွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးအတွက်အားတတ်စရာသတင်း ကောင်း AACကိုချိတ်ဆက်အကူအညီတောင်းလာလို့နွေဦးတော်လှန် ရေးအတွက်ဆိုဘဲမြန်မာလုပ်သားကံထူးရှင် ထိုင်းဘတ်ငွေသိန်းတစ်ရာနှစ်ဆယ် လေယာဉ်ပစ် လောင်ချာ ဝယ်လို့လောက်မလားဦးခိုင်ကျွန်တော့်ကို တော်လှန်ရေးတပ်ထဲကိုပို့ပေးပါတဲ့ စစ်ကောင်စီရေလေယာဉ်ဘယ် နှစ်စီးလာမလဲတောထဲကစောင့်နေမယ် အရေးတော်ပုံအောင်နေပြီAAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးခိုင်ကြီး ၁၆ ရက် ၆လ ၂၀၂၁ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ် သားတစ်ဦးထိုင်းထီပထမဆု ဘတ် ၆ သန်းဆုနှစ်စောင် တွဲ ကံထူးရှင်ဖြစ်ခဲ့ AAC ထံဆက်သွယ်ပြီးထီဆုငွေ ထုတ် ပေးရန်အကူအညီတောင်းခံလာ AAC အဖွဲ့ မှ ထုံးစံအတိုင်း 29 […]
June 19, 2021 Cele Fans Comments Off on မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လွှာကို FAO လူရာမသွင်း ပယ်ချခံရ
ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ကျင်းပတဲ့ FAO ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လွှာစစ်ဆေးရေး ကော်မတီက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တင်ပြလာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခန့်အပ်လွှာကို ပယ်ချလိုက်ပြီး မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြုတဲ့ မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမျှ အသိအမှတ်မပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အခုလို ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက် FAO အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနဲ့ တခြား ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ WHOနဲ့ILO နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ တို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို သတိပြုလေ့လာခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံခြင်းမပြုဖို့ WHO နဲ့ ILO တို့က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကို […]
“အောင်ဆန်းစုကြည်” အမည် ဘယ်သူပေးသလဲ?
June 19, 2021 Cele Fans Comments Off on “အောင်ဆန်းစုကြည်” အမည် ဘယ်သူပေးသလဲ?
၁၉၄၅ ခုနွစ်၊ ဇွန်လ၏ တစ်နေ့သောနေ့ရက်ဗိုလ်ချုပ်နေထိုင်ရာ တာဝါလိန်းလမ်း အိမ်ကြီး၌ခလေး ငိုသံလေး ပျံ့လွင့်နေ၏။ အူဝဲ——–အူဝဲ———ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ် စီးတော်ယာဉ်ဝူစလေကား (RC-2874) ခြံဝင်းအတွင်းသို့အပါးတော်မြဲ ဗိုလ်ထွန်းလှ မောင်းနှင်၍ ဝင်လာ၏။ အိမ်အဝင် လှေခါးရင်းရောက်သော် ကားရပ်၍နောက်ခန်းမှ ဗိုလ်ချုပ် ဆင်းလာပြီး ထုံးစံအတိုင်းခြေလှမ်းအသွက်နှင့် တက်သွား၏။ ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာမှာမူ ခါတိုင်းလိုသုန်မှုန်တွေးတောနေပုံမျိုး မဟုတ်၊လိုချင်တာရလာ၍ ပီတိဖြစ်နေသကဲ့သို့ ရှိ၏။ အိမ်ကြီး၏ အောက်ထပ်ဝရံတာတွင်သားတော်မောင် အောင်ဆန်းဦးနှင့်အောင်ဆန်းလင်းတို့ကို တပည့်များကထိန်းကြောင်းကာ စက်ဘီးစီးလျက် ဆော့ကစားနေကြ၏။ “ငါ့သားတွေ […]
နှစ်ပါင်း(၅၀)ကျော်ကွဲကွာသွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ချစ်သူကို အမြဲလာရှာခဲ့တဲ့ ဂျပန်အဘိုးအို
June 19, 2021 Cele Fans Comments Off on နှစ်ပါင်း(၅၀)ကျော်ကွဲကွာသွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ချစ်သူကို အမြဲလာရှာခဲ့တဲ့ ဂျပန်အဘိုးအို
နှစ်ပါင်း(၅၀)ကျော်ကွဲကွာသွားတဲ့ ချစ်သူရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အမြဲလာရှာခဲ့တဲ့ ဂျပန်အဘိုးအို အချစ်စစ် ဆိုတာ တကယ်ရှိကြောင်း သက်သေ ပြသွားတဲ့ သူတစ်ယောက်ကြောင်းကို ပရိသတ် ကြီးအတွက် ပြန် လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက်ပါ တယ်နော်။ ဒီအဖြစ် အ ပျက်လေးကို ဂျပန် နိုင်ငံ မှာရှိ တဲ့ မြန် မာကျောင်းသူ တစ်ယောက် က အခုလို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ […]
June 19, 2021 Cele Fans Comments Off on NUG က ကြေညာတာနဲ့ မြို့သိမ်း တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲမယ်ဆိုတဲ့ ပဲခူးတိုင်း PDF
NUG က တိုက်ပွဲခေါ်သံကြေညာတာနဲ့ မြို့သိမ်း တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲမယ်ဆိုတဲ့ ပဲခူးတိုင်း PDF (ရုပ်/သံ) အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) က တိုက်ပွဲခေါ်သံပေးတာနဲ့ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲဖို့ လူငယ်တွေကို စစ်သင်တန်းတွေပေးပြီး ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ပဲခူးတိုင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) က ပြောဆိုပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်း PDF ဟာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ အညီ တိုင်းအတွင်းနေရာအနှံ့က လူငယ်တွေနဲ့ မေလ ၁၅ […]
June 19, 2021 Cele Fans Comments Off on စံပြဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုအောင်မိုး
June 19, 2021 Cele Fans Comments Off on အိမ်ရှင်မတွေ သတိထားသင်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ငွေဆုမဲ/ဆုကြေး
June 19, 2021 Cele Fans Comments Off on ကမ္ဘာကျော်သူခိုး မြန်မာမှာပဲရှိတယ်